Concrete Batching Plant, Concrete chisanganiso, Concrete Boom Pump Truck - Conele Group
Concrete batching chirimwa
Mira kongiri batching chirimwa
Dry dhaka vaiitawo chirimwa
Twin-mugodhi kongiri chisanganiso
Concrete ukaisa tiguu
Concrete tiguu pombi rori
Concrete marara Machine
3 inogadzirwa zvingoro
Kurimwa garo iri muna South China, Southwest China uye North China.Convenient gungwa uye njanji yokufambisa chendangariro kunonyanyisa zvikomborero.
15 nemhando midziyo
Kuvanza kongiri vaiitawo kupomba ukaisa uye marara midziyo, zvakawanda sarudzo kwamuri.
makore 25 'ruzivo
Hwakagadzwa muna 1993, kuna R & D, rokutengesa uye pashure-rokutengesa nekongiri michina.
kambani 28 Bazi
subsidiaries siyana omerera R & D uye kugadzirwa zvakasiyana zvinoriumba, achivimbisa kuti kunaka nomumwe rokuti uri zvebhizimisi pamwero uye vakazvimiririra kutengeswa uye akapukunyuka mumusika anogona.
The kambani vaiendeswa uye anokudziridza matarenda kwounyanzvi uye rinoungana kwenguva kukura wekambani.
basa Customized anoratidza redu hwokugadzira simba uye musika acceptance.Almost zvose zvinogona customized maererano zvaunoda, rinotaura kati muchiso nokusarudzwa, zvokunze kushongedzwa, etc.OEM uye ODM ari akapa.
Tisati kutengesa ticharamba varumbidze dzakakodzera midziyo maererano nemhosva zvinodiwa uye zvimwe zvinobatsira ezvinhu kushandisa kwedu ruzivo uye nounyanzvi knowledge.After nokutongesa, injiniya wedu kuwanikwa kuti kuisa debugging uye kurovedzwa pachedu paIndaneti kana nzvimbo.
Factory zvakananga mutengo
Kutsvaga agents.The sangano kwava nzira huru boka redu kuti voisa zvose world.we'll kuedza zvose zvatinogona kuti kutsigira uye kudzivirira zvinodiwa agent.lower mutengo, unhu mutengi pfuma, vakasununguka okushambadza kuratidza kusimudzirwa etc.
Self climb ukaisa tiguu
Twin mugodhi Concrete chisanganiso
JZC / JZR350 duku inotakurika chisanganiso